"Mutauro wemapururu", nyaya yekuenda kuGalicia muna 1936 | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Mabhuku, Nyaya
"Mutauro wemabhururu" ndeimwe yenyaya gumi nenomwe dzakabatanidzwa mukuunganidzwa kwenyaya nemunyori wechiGalician, mudetembi uye mutori wenhau Manuel Rivas. Pakutanga yakanga yakanyorwa muchiGalician uye ichishandurwa muchiSpanish nemunyori iye. Iyo nyaya iri pamusoro pehushamwari hwemukomana anonyara ane makore matanhatu okuberekwa nemudzidzisi wake wekuchikoro mutaundi rakadzikama muGalicia muna 16, pamberi pehondo yevagari vemo.
Kubva payakaburitswa muna 1995, Yakanga yakanyorwa seimwe remabasa akanakisa akanyorwa mumitauro yeSpanish neyeGalician. Vamwe vatsoropodzi vanotozvitora seimwe yezvimedu zvepakutanga zvemhando iyi mumabhuku epasirese. "Mukurumbira" waro wakawedzera zvakanyanya mushure mekugadziriswa kwefirimu kwakatungamirwa naJosé Luis Cuerda, yakatanga kuratidzwa kuSan Sebastián Film Festival mu1999.
1.2 Kuti unondida (Zita rebasa muchiGalician)
2 "Rurimi rwemapururu"
2.1 Protagonist yekuchema naye
2.2 Nyaya yaunotoziva kuti ichapera sei
3 Iyo firimu inoenderana
Manuel Rivas ndomumwe wevanonyanya kukosha mumabhuku eGalician. Muna 2009 akazova chikamu cheRoyal Galician Academy uye muna 2011 Yunivhesiti yeA Coruña yakamupa chinzvimbo cheDoctor Honoris Causa. Kunyangwe kuve mutapi venhau nebasa, akakwanisa kusanganisa chikamu chake che "murume wenhau", nepeni isinganeti yenhetembo, zvinyorwa uye nyaya.
Akazvarwa muA Coruña muna Gumiguru 24, 1957. Pazera ramakore gumi nemashanu anga achitove kuita raramo semutori wenhau achinyorera bepanhau. Iyo yakanaka yeGalician. Mushure mekupedza chikoro chesekondari, akatamira kuMadrid kunodzidza Information Sayenzi. Nguva pfupi apinda Topic, svondo rekutanga rakaburitswa zvese muchiGalician. Parizvino, anoshanda pamwe neakasiyana anodhinda midhiya, kusanganisira pepanhau Nyika.
Kunze kwekuzvipira iye kunyora kubva kwakasiyana nzira dzekutaura, Rivas inyanzvi mune zvemagariro. Muna 1981 akapinda mukushanya kune mugero weAtlantic uko kwakaraswa tsvina yenyukireya. Kuratidzira uku kwakapera neInternational Maritime Organisation kurambidzwa kwekushandisa pasi pegungwa semakuva emarara eatomiki.
Semhedzisiro ye "Mukurumbira Njodzi" - ngarava yemafuta yakanyura mumahombekombe eGalicia muna 2002 - yakakurudzira kugadzirwa kwenzvimbo yevagari Hazvina futi. Saizvozvo, mubatsiri wekutanga weGreenpeace, Spain Chitsauko uye basa rake rakazivikanwa nemasangano akadai seAmnesty International.
Kuti unondida (Zita rebasa muchiGalician)
Unodei kwandiri, rudo?
Unogona kutenga bhuku pano: Unodei kwandiri, rudo?
Unodei kwandiri, rudo? muunganidzwa wenyaya gumi nenhanhatu dzine dingindira rakajairika: rudo. Iko kunzwa kunoswededzwa kubva munzira dzakasiyana, ine huwandu hwakakura kwazvo hunogona kusanganisira (ingangoita) misiyano yese yakafukidzwa neshoko. Iyo haisi kana kusiira musoro wenyaya, uyo - wakanaka kana kuti wakashata - wakakosha zvakafanana: kusuwa kwemoyo.
Rivas, anoshanda mu nhetembo uye rondedzero kubva kumagumo kwema60s, yakawana kuzvitsaurira kwayo kwakazara nemusoro uyu. Bhuku rake rekutanga raive renhau Penzura yemuvezi (1988); anokunda mibairo yakawanda uye akaendeswa kubhaisikopo naAnton Reixa. Gare gare, akaburitsa kumwe kuunganidzwa kwenyaya: Miriyoni mombe (1990), musanganiswa wakashinga wenziyo dzemazuva ano nerusununguko rwekunyora nhetembo
Unogona kutenga nyaya pano: Mutauro we ...
"Rurimi rwemapururu" ndiyo yechipiri yenyaya dzakabatanidzwa mu Unodei kwandiri, rudo? Nyaya yekutanga inopa kuburitsa zita rayo. Iyi rondedzero yakapusa padanho remamiriro. Mariri, fungidziro yehucheche yemukomana wemakore matanhatu yakanyatsoitika uye inenge isinganzwisisike yakazadzwa neyakajeka mushumo wenhau. Zvakare, hapana ruzivo rwakasiirwa mukana.
Naizvozvo, basa rinodzikamisa ruzivo rwakawanda mumapeji mashoma (10). Kunyangwe asingatsvage tsananguro - munyori haana nguva nazvo - zvinokwanisika kuwana mumaruwa eGalicia muna 1936. Nechikonzero ichi, zvinokwanisika kufema hwema hwese hwezvisikwa, kunzwa kuumbwa kwemiti, kubata makwenzi, kukwira Sinai "uye kunyange kuona rurimi rwemapururu."
Protagonist yekuchema naye
Kuziva neSparrow, mwana protagonist wenyaya, zviri nyore. Ipapo, muverengi anonzwa ega kutya kwake kuenda kuchikoro nekuda kwekutya kwakasimudzwa nababa kunanga kuvadzidzisi. Zvakanaka, zvinofungidzirwa, vadzidzisi "vakarova." Nhoroondo yacho yakanyatsoitwa zvekuti muoni anogona kuona kunhuwa kweweti apo kutya kunoita kuti mwana atadze kutonga pamusoro pechipfuva chake.
Uye hongu, uyo anoverenga, kana akazvinyudza mutsamba zvakanaka, ndiye anoperekedza mudiki apo - achinyara - anotiza mushure mekudonha bhurugwa rake pamberi peaanodzidza navo. Nekudaro, gare gare zvese zvinodzikama nekuda kwekushivirira uye mutsa we Don Gregorio, mudzidzisi ane kumeso kwe "chura". Iyo yekupedzisira hunhu hune simba rakakura rekufambisa ruzivo, hunhu hwakaenzana zvinoenderana nehunhu hwayo husingafadzi.
Nyaya yaunotoziva kuti ichapera sei
Don Gregorio muRepublican, sababa vemukomana. Naizvozvo, hazvina kuoma kufungidzira mhedzisiro kana vakasavanza vavariro dzechokwadi dzezvematongerwo enyika kana vapanduki vapedza kuvapo kweChipiri Spanish Republic.
Yokutanga haina kukotama. Wechipiri, anonyadziswa, anoguma achidzivirira zvine ruzha zvinhu zvaasingatende. Mukupererwa kwake kuti azviponese, anokwevera mwanakomana wake asina mhosva, uyo asinganyatsonzwisisa chokwadi, asi achifunga kuti zvese zvakanganisika. Pakupedzisira, runako runotsvairwa nehutsinye. Kunyangwe ivo protagonists venyaya vasingazvizive, vaverengi vanonzwisisa kuti yapfuura "naivety" haife yakadzoka.
Iyo firimu inoenderana
Nescripturo yaive nekubatana kwake Manuel Rivas, iyo inogadziriswa naJosé Luis Cuerda, nenzira yekufananidzira, inoputika (mupfungwa yakanaka yeshoko). Kusvika pakuti Iyi firimu yakarongedzwa seimwe yeakanakisa kugadzirwa muLatin America munhoroondo yese yeanomwe hunyanzvi.
Zvechokwadi, iyo firimu yakahwina mubairo we Best Adapted Screenplay pane XIV edition yeGoya Awards. Avo vasati vawana mukana wekuverenga nyaya iyi vari panguva. Sei? Zvakanaka, zvinongotora anenge maminetsi gumi kuti ufambe kuenda kuGalician meadows uye kuyemura, mumunhu wekutanga, "Mutauro wemapururu."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nyaya » Rurimi rwemapururu
Zvinonakidza kwazvo kusangana nevanyori vakakura vemutauro wechiCastilian, unoona ndanga ndichida kwazvo kuverenga bhuku ravo uye kuona iyo firimu.
Nyanduri werufu Sosaiti